Dabageed”Waare wabiga qarkiisa oo bahalo galeyn ah aa laga sheegayay”+COD | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Dabageed”Waare wabiga qarkiisa oo bahalo galeyn ah aa laga sheegayay”+COD
Gudoomiyihii xilka laga qaaday ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar (Dabageed) ayaa ka hadlay xiisada ka taagan magaalada Baladweyne iyo safarka uu magaaladaasi ku tagay Madaxweynaha khilaafka kala dhaxeeyo ee Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare.
Yuusuf Davageed ayaa ku eedeeyay Madaxweyne Waare in uu ka dambeeyo xiisada iyo dhibaatada ka taagan magaalada Baladweyne, waxa uuna sheegay in masuuliyada waxii dhacay iyo waxii kale oo dhacaba uu masuul ka yahay Madaxweyne Waare.
”Wax walbo oo horey uga dhacay Baladweyne ama hada kadib ka dhaca waxaa masuuliyadeeda qaadanaya Maxamed Cabdi Waare” ayuu yiri Yuusuf Dabageed oo wali diidan xil ka qaadistii lagu sameeyay.
Waxa uu sheegay Yuusuf Dabageed in uusan weerar ku aheyn halka uu joogo Madaxweynaha Hirshabelle ee duleedka Baladweyne, waxa uuna tilmaamay in uu is difaaci doono hadii lasoo weeraro.
”Baladweyne dhibaato aan aheyn Waare iyo Cali Guudlaawe kama jirto, anigu duulaan kuma ahi halka uu joogo Waare, waxaansa diyaar u ahay in aan is difaaco hadii la isoo weeraro ” ayuu yiri Yuusuf Dabageed.
Gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan oo ku diganayay Madaxweyne Waare ayaa sheegay in uusan joogin magaalada Baladweyne balse uu joogo xero milatari oo qarka u saaran Wabi iyo dhul uu sheegay in bahalo galeyn yahay.
”Waare hada Baladweyne ma jooge meel xero milatari ah oo wabiga qarkiisa oo bahalo galeyn ah ayaa laga sheegayay, waxa uu meesha ku joogaa wax aan ku habooneyn qof masuuliyad sheeganaya ” ayuu yiri Yuusuf Dabageed.
Gudoomiyihii gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed ayaa wali diidan xil ka qaadista uu ku sameeyay Madaxweynaha Hirshabelle, waxa uuna sheegay in xil ka qaadista lagu sameeyay loo soo maray sifi sharci daro ah.